Mbowadoma nye Warwick Atsenae a Wɔbɔ ho Ban
Hɛn Adansi Edwuma Ahorow
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chuvash Croatian Czech Dangme Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Krio Lithuanian Malagasy Malay Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Nahuatl (Huasteca) Norwegian Oromo Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Valencian Wallisian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zulu
Wɔrobɔ Ɔdomankoma Egyapadze A Ɔwɔ Warwick No Ho Ban
Jehovah Adasefo ahyɛ ase risi hɔn wiadze nyina edwumayɛbea tsir fofor no wɔ beebi a atsew no ho a ɔbɛn Sterling Forest Lake (Blue Lake) wɔ New York State. Ebɛnadze na wɔreyɛ dze abɔ atsenae nye mbowadoma a wɔwɔ hɔ no ho ban?
Mbrɛ ɔbɛyɛ a mbowa bi tse dɛ mbowatsena nye epuhuruw ahorow nnkɛba adansibea hɔ ma woeepira anaa woeewuwu no, Adasefo no agye adansibea no ho ban ber tsiabaa bi mu. Sɛ ban no ne fã bi tɔ kyima a, obotum ama mbowa no bi edua mu na wɔaaba adansibea hɔ. Dɛm ntsi, dabaa Adasefo no hwɛ hu dɛ ban no ne fã biara nntɔɔ kyima. Sɛ wowie adansi edwuma no na wɔsɛɛ ban no a, abowatsena biara a wobohu dɛ ɔaba beebi a ɔbɛn adan a woesisi no, obi a ɔama no ntsetsee wɔ mbowatsena nyɛn mu beyi no efi hɔ dze no akɔ kwaa no mu.
Anoma a ofi boka afamu
Mbrɛ ɔbɛyɛ a biribiara nnkɛyɛ osiakwan mma nnoma a wofi boka afamu ba bɔtow nkyirefuwa na wɔhwɛ hɔn mba wɔ hɔ no, esukwankyɛbatɔber mu na wobubu ndua a ɔwɔ hɔ no. Sɛ adansi edwuma no bɔ adze a, Adasefo no dze nnomabuw besisi mbea a hɔ atɔ kyima no dze atwetwe nnoma no ma wɔaasan aba hɔ bio.
Asaase no ne fã ahorow bi a ayɛ nkokwaa na mbɔnsa no, wobesiesie hɔ wɔ October nye March abosoom no mfinimfin. Dɛm adzeyɛ yi bɛma dua a wɔfrɛ no hyssop skullcap a no ho ayɛ nã no n’aba aabɔ apetse na eefifir yie. Ɔwɔ mu dɛ ofi mfe 2007 dze besi ndɛ no wonnhun dɛm ndua yi mu kor mpo wɔ Warwick adansi edwumayɛbea hɔ dze, naaso woridzi dɛm nhyehyɛɛ yi do pɛpɛɛpɛr.
Sterling Forest Lake no nye adansi edwumayɛbea no bɔ he, na ɔyɛ bea a esuborɔkɔ nye nsumunam asorɔtow wɔ. Mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɔbɔ nsutaae no ho ban no, adansifo no dze adansi ho nhyehyɛɛ a otu mpon egugu akwan mu. Dɛm nhyehyɛɛ yi a otu mpon no bi nye mpɔnkɔfuw a wobodua wɔ adan no do. Sɛ nsu tɔ a, mfuw yi bɔsɔn fĩ biara a ɔwɔ mu no do, na aakora nsu no bi do wɔ adan no do. Nkyii so, wɔbɔkora mfuw a ɔwowɔ nsutaae no ano no do, na wɔaabɔ ho ban.
Ɔbarimba bi a ɔyɛ Adasefo no mu kor a odzi akotsen wɔ dɛm dwumadzi yi mu no kã dɛ, “Kaansa dɛm dwumadzi yi bɛgye mber pii nye nhyehyɛɛ a ɔkɔ ekyir mpo a, yetu hɛnho esi hɔ dɛ yɛbɔbɔ ɔdomankoma egyapadze a ɔwɔ Warwick adansi edwumayɛbea hɔ no ho ban.”
Jehovah Adasefo Sesã Bea A Hɔn Wiadze Nyina Edwumayɛbea Tsir Wɔ No
Ofitsi afe 1909 a Jehovah Adasefo edwumayɛbea tsir no awɔ Brooklyn, New York no, ebɛnadze ntsi na afei woriyi akɔ New York etsifi afamu, wɔ bea a ɔmmbɛn kurow mu?
Jehovah Adasefo Nya Abawdobɔdze Osian Hɛn Atsenae A Wɔbɔ Ho Ban Ntsi
Etuhoakyɛfo Sesã Tuxedo Adan No